Waqtiyo badan oo daadin engine waa lama huraan, Gaar ahaan haddii aad isticmaasho saliid xun, Waxaa jira waxyaabo badan oo nijaas ah oo ku jira saliida, Kaliya maahan inay kordhiso duugista iyo jeexitaanka mishiinka, Waxay sidoo kale sababi kartaa saliida mishiinka oo daata. Aynu ka wada hadalno waxyaabaha qaarkood ee daloola ee ku yaal daboolka qolka waalka. Maxaa sababa waalka cha ...
Farqiga shaabadda sidashada iyo daboolka biraha Shaqadu waa ka duwan yahay - sidashada giraanta shaabadda ayaa ah waxqabadka qufulkeeda iyo nolosha adeegga ayaa leh muhiimadda muhiimka ah - Qaadashada daboolka boodhka ayaa ah inay ka hortagto qaadista boodhka iyo qashinka kale ee sidaas u saameeya shaqada. Waxyaabaha waa ka duwan yahay, qaadashada shaabad r ...
Shaabadood Automobile Codsatay qaybo kala duwan. waxaa loo qeybin karaa qeybaha soosocda iyadoo loo eegayo qeybaha la isticmaalay: shaabadda saliidda jihada, shaabadda saliidda crankshaft, mashiinka saliidda mashiinka, shaabadda saliidda matoorka waalka, shaabadda saliidda mashiinka mashiinka, saliidda bamka saliidda, daabacaadda saliidda gudbinta, shaabadda saliida masafka. shaabadda xargaha giraanta, ...
shaabad saliid sababaha fashilka guud iyo hababka cilad bixinta
Khatarta saliida waxaa iska leh walxaha qufulka dhaqaaqaya, iyo jiritaanka "filim saliid muhiim ah" waa xaalada ku filan oo lagama maarmaanka u ah shaabadda saliidda. Sababtoo ah jiritaanka filimka saliidda saliidda ayaa lagama maarmaan u ah si loo hubiyo qufulka saliidda ee qufaca saliidda, iyo jiritaanka lubri ...
Khatimidii saliida iyo xirmooyinka giraan iibsiga hagaha
Markaad rabto inaad kahesho shaambado lagu kalsoonaan karo iyo O-giraanyada Shiinaha.Waxaa jira soosaareyaal badan oo soo saaraha ah, laga yaabee inaad wareersan tahay, maxaa yeelay waa aagag kala duwan, iyo qiimo kala duwan..Waxaa jiri doona tayo kala duwan oo loogu talagalay shaabadaha kala duwan. Sidee loo helaa shaabad saliid lagu kalsoon yahay iyo o giraan? 1- warshadda daabacaadda saliidda ...
Mabaadi'da shaabadood Haydarooliga
Khatarta saliidda Haydarooliga guud ahaan waxaa laga sameeyaa maaddada daboolka caagga ah. Giraanta shaabaddu waxay leedahay qaab-dhismeed fudud, wax-qabad wanaagsan oo wax lagu xiro iyo khilaaf hooseeya. Waxaa loo isticmaali karaa isu soo celinta toosan iyo dhaqdhaqaaqa wareega, laakiin waxaa loo isticmaalaa hagaajinta shaabadaha, sida shaabadaha u dhexeeya dhuumaha, madaxyada silsiladda iyo ...
Noocyada Power isteerinka saliid bamka
Khatarta saliidda mashiinka mashiinka tamarta: 1- wareejinta saliida maareynta quwadda korantada: wareegga saliidda gelinta iyo shaabadda saliidda mashiinka dhejinta. 2- shaabadda saliidda maareynta isteerinka marsho: shaabadda saliid usheeda dhexe gelinta, shaabadda saliid usheeda dhexe pinion, shaabad saliid gudaha iyo dibedda shaabadood. 3- shaabad saliid ah oo wadata dhululubo haydarooliga ah. 4-saliid badda ...
Soo bandhigida shaabadaha magnetic
Khatarta saliida magnetic waa shey loogu talagalay in lagu sameeyo cilmi baaris iyo tijaabooyin sanado badan kadib. Waxay si hal abuur leh u isticmaashaa nidaamka magdhowga qaybsan iyo tikniyoolajiyad cusub oo wax lagu xidho, rakibidda fududna waxay xallin kartaa dhibaatooyinka ay adkayd in laga tirtiro taariikhda warshadaha. Kaliya maahan jawaab ...
Noocyada giraanta shaabadda caag ah
Giraanta U-qaabeeya, oo inta badan loo adeegsado soo saarista nidaamyada hidda-hidda ee isku-shaandhaynta isku-celinta. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay mashiinada dhismaha shaabadda silsiladda korantada. O-ring badanaa waxaa loo isticmaalaa daboolida joogtada ah iyo isku shaandheynta. Marka loo adeegsado shaabadda Dhaqdhaqaaqa Rotary, waxay ku egtahay xiritaanka xawaaraha hooseeya ee wareegga ...
Xalka Shidaalka Daadinta Saliida Gearbox Khatimidda?
Gudbinta farsamada ayaa ah tan ugu caansan dhanka injineernimada. Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in lagu gudbiyo xoogga iyo isku gudbinta khilaafaadka inta badan xoogga is-qabsiga ee qaybaha mashiinka, oo ay ku jiraan gudbinta suunka, gudbinta xarigga iyo gudbinta wareegga wareegga. Kala soocida alaabta aasaasiga ah: hoos u dhige, br ...
9 Tilmaamo ku saabsan doorashada shaabadaha maaddada cinjirka ah?
Maxay yihiin qodobbada muhiimka ah ee la tixgelinayo marka la dooranayo qalabka wax lagu shaabadeeyo ee saxda ah? Qiimaha mudnaanta leh iyo Helitaanka Midab u Qalma ee shaabadaha Dhammaan sababaha saameynta ku leh nidaamka xiritaanka: tusaale kala duwanaanta heerkulka, dareeraha iyo cadaadiska Kuwani waa dhammaantood waxyaabaha muhiimka u ah qallalka ...
Xirfadlaha saaraha mechnical seal soo saare shirkad alaab adag oo caag ah Farsamooyin farsamo oo ka shaqeeya dhexdhexaad dareere guud ahaan waxay ku tiirsan yihiin filimka dareeraha ah ee ay sameyso dhexdhexaadiyaha dareeraha ah ee u dhexeeya dusha sare ee khilaafaadka dhaqdhaqaaqa iyo giraanyada taagan ee saliida. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo ...